Abahlinzeki be-PCR kanye neFektri | Abakhiqizi baseChina PCR
I-Lnc-RT Heroᵀᴹ I (ene-gDNase) (Super Premix ye-first-strand cDNA synthesis kusuka ku-lncRNA)
Iqhawe le-Lnc-RTTM I (With gDNase) is a reverse transcription system ngokukhethekile eyenzelwe i-lncRNA ukususa ngokushesha ukungcola kwe-genomic DNA. I-5 × gDNase Mix ingasusa ngokushesha i-genome esele ku-RNA ngo-42 ° C imizuzu engu-2, igweme ngempumelelo ukuphazamiseka kofuzo emiphumeleni ye-qPCR.
I-5 × L-RT iqhaweTM IMix iqukethe i-Foregene LncRNA Reverse Transcriptase eyenziwe ngokukhethekile yi-Foregene, okuwuhlobo olusha lwe-reverse transcriptase ngokukhethekile ye-lncRNA namanye amathempulethi ayinkimbinkimbi e-RNA, anokuqina okuqinile kwe-RNA nokusebenza kahle kokurekhoda okuphezulu. Uhlelo olwenziwe kahle lwenza inani lokubhala elihlehlayo lisheshe futhi lingabhala kalula izifanekiso ze-RNA ezinokuqukethwe okuphezulu kwe-GC nesakhiwo esiyinkimbinkimbi sesibili. Ukuhlanganiswa kwe-strand cDNA yokuqala kungaqedwa ku-42 ° C ngemizuzu eyi-15.
Isikhathi Sangempela PCR Easyᵀᴹ-Taqman
I-2X PCR yangempela ilulaTM IMix-Taqman inikezwe yi-Real Time PCR EasyTM-I-Taqman kit uhlelo olusha lwe-premix olusebenzisa izindlela ezithile zokukhanyisa ze-Real Time PCR zokukhulisa amandla, ezingathuthukisa kakhulu ukucaciswa komkhiqizo nokuzwela kokuphendula. I-ROX inikezwa njengedayi yokulawula kwangaphakathi.
2X PCR Real KululaTM IMix-Taqman iqukethe iThaq DNA Polymerase eyingqayizivele eshisayo kaForegene. Uma kuqhathaniswa nama-enzyme ejwayelekile e-Taq, inezinzuzo zokukhulisa okuphezulu, amandla aqinile wokukhulisa nokukala okuphansi kokungahambisani. Inganciphisa ukukhulisa okungacacisi futhi ithuthukise ukunemba kwe-PCR.
Isikhathi Sangempela se-PCR Easyᵀᴹ-SYBR Green I kit